ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဘရာဇီးဘောလုံးကစားသမားများ နေမာကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Neymar အတ္ထုပ္ပတ္တိများသည်သူ၏ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ အစောပိုင်းဘဝ၊ မိဘများ၊ မိသားစုအချက်အလက်၊ ဇနီး၊ ကလေးများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်ဘဝပုံစံကိုအပြည့်အဝဖော်ပြသည်။ အမှန်တရားကတော့နေးမာရဲ့အစောပိုင်းနေ့ရက်များမှ စ၍ သူအောင်မြင်ခဲ့ချိန်အထိသူ၏ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုအပြည့်အဝဆန်းစစ်လေ့လာထားပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကသူ့မျက်စိ-ဖမ်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး d'Or များအတွက်လျာထား၏စီးရီးအကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သော်တစ်ခုသာလက်အနည်းငယ်ပရိသတ်တွေအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောနေမာ Jr ရဲ့ဇီဝအကြောင်းအများကြီးကိုငါသိ၏။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
နေမာဒါဆေးလ်ဗားဆန်းတို့စ Junior အဆိုပါ5ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်th Mogi Das Cruzes မှာဖေဖော်ဝါရီလ 1992, ဆောပိုလို, ဘရာဇီး၏။ သူကသူ့ဖခင်နေမာဆန်းတို့စမူလ (ကပြီးတော့ဘောလုံးသမား) နှင့်သူ၏မိခင်, Nadine ဆန်းတို့စမှမွေးဖွားခဲ့သည်။
လေးလတစ်နူးညံ့နှစ်အရွယ်မှာနေမာကိုအံ့ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ Fatal ကားတစ်စီးပျက်ကျမှုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆိုးဝါးကားတစ်စီးပျက်ကျမှုသူတို့အချို့ဆွေမျိုးများသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့သူတို့ရဲ့လမ်းအပေါ်ကဲ့သို့မဆငျမခွသူ့မိသားစုရဲ့ကားသို့မတ်စောက်သောတောင်ပေါ်ပြေးသောလမ်းကွေ့များသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်မော်တော်ယာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
နေမာ - ကြီးပြင်းလာတဲ့နှစ်များ:
တဦးတည်းယနေ့ဘောလုံးပါရမီကြည့်သောအခါ, သူတစ်ဦး rosy ကလေးဘဝမရှိခဲ့ဘူးကြောင်းယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့သူ့မိသားစုကသူ့ကလေးမွေးဖွားသည့်အချိန်တွင်ဆင်းရဲသားကိုဖုန်ခဲ့ကြသည်။ ဖခင်နေမာမူလသူ့မိသားစုကိုဆက်ထိန်းဖို့မျိုးစုံအလုပ်အကိုင်များလုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူတို့ကနေမာရဲ့ပထမဦးဆုံးမွေးနေ့ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
နေမာ (အောက်တွင်ပုံ) ကျောင်းပညာရေးအသက်အခါအကျိုးဆက်, မိမိ ilk ကိုက်ညီမယ့်ကျောင်းကစာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ နောက်ကျောအိမ်မှာကျောင်းမှာအပြီးသူ့မိသားစုသူတို့က, နေမာနှင့်သူ၏ညီမလေ့လာမှုအဘို့အ illumination ၏တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဖယောင်းတိုင်အတူတက်ထားကိုဖန်ဆင်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြောင့်မတတ်နိုင်ရိုးရှင်းစွာသောကွောငျ့အဘယ်သူမျှမလျှပ်စစ်မီးရှိခဲ့ပါတယ်။
နေမာမူလသူ့မိသားစုများ၏စားစရာဘို့ရုန်းကန်နေစဉ်, မိမိသားကိုနေမာ Jr ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဘောလုံးကွင်း၌သူ၏အခွက်တဆယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတော့တာပဲ။ ဘောလုံးသမားများစညျးစိမျအခြားစုတ်မတူဘဲဘောလုံးအတွက်နေမာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ဘတ်စကက်ဘောတရားရုံးနှင့်မကစား၏လယ်ပြင်ကနေပယ်ကန်။
သူကစားရန်သင်ယူ ဖူဆယ် အများကြီး bounce ပါဘူးတဲ့ခဲယဉ်းဘောလုံးဘောလုံးကန်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောမိုးလုံလေလုံဂိမ်းထဲမှာသူ့ကိုယ်သူစုံလင်။ တစ်ဘတ်စကက်ဘောတရားရုံးတွင်ကစားသောဂိမ်းကအန္တရာယ်ပိုင်ထိုက်သောနှင့်န့်အသတ်ရှိနေသော်ငြားလည်း, နေမာဘောလုံးနယ်ပယ်များတွင်သူသည်ယနေ့ထားပါတယ်အဆိုပါအထင်ကြီးကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမအချိန်အတွက်သူအားမိမိကျွမ်းကျင်မှုယူလမ်းမများပေါ်တွင်ရွယ်တူချင်းအကြားရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်။ နေမာ Sr; မိမိသားကိုသိမ်းယူနှင့်ရံဖန်ရံခါကျွမ်းကျင်ပိုင်၏လမ်းကြောင်းကိုချငယ်ရွယ်နေမာလမ်းလျှောက်ရန်သူ၏အလုပ်များအချိန်ဇယားထဲကအချိန် ယူ. ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုသည်။
အဆိုပါမျိုးဗီဇ၏များစွာသောရန် နေမာ Jr ရဲ့ မိဘများ တစ်သားတစ်စူပါသည်သူငယ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံမထိုက်မတန်ပါဝငျ။ သူတို့တစ်တွေရှားပါးဘောလုံး genus ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြရာနှစ်ခုဒဏ်ငွေဇီဝနမူနာခဲ့ကြသည်။
နေမာအများအားဖြင့်မိမိအဖူဆယ်နှင့်လမ်းပေါ်ပစ်ကပ်ဂိမ်းမတိုင်မီသူတို့ထံမှနှစ်ဆအနမ်းကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ အဆိုပါချစ်ခင် timeless ကြီးကနေမာဆန်းတို့စမှာ (အောက်တွင်ပုံ) သူ၏ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကလပ်ကြီးပင်စဉ်ဆက်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်, သိသည်။
... '''' ဒီတစ်ခါလည်း, ကြမ္မာနှင့်ကံကြမ္မာသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုထက်ပိုကောင်းတဲ့မိဘများပေးပြီနိုင်ဘူး။ သို့သော်ဘာမျှကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျထက်ပိုကောင်းတဲ့သားပေးပြီနိုင်ဘူး။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုအကောင်းဆုံးပါပဲ, သင်သားကိုချစ်။ အခုတော့။ GO လျက်လူအပေါင်းတို့ပြီး! " ...
နေမာအတ္ထုပ္ပတ္တိ - Santos ၏အိတ်ထဲတွင်နည်းပြ -
နေမာဆန်းတို့စမှာပဲနေချိန်မှာသူဟာကလပ်ရဲ့နည်းပြ, Dorival အငယ်တန်း၏အိတျမှဦးဆောင်သည့်အဖြစ်အပျက်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ Dorival ဂျူနီယာတစ်ဦးပြစ်ဒဏ်ကန်တာရာမှနေမာတားဆီးအခါအဖြစ်အပျက်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကန် Marcel အမည်ရှိအခြားကစားသမားနေမာပြင်းထန်သောကိုဖန်ဆင်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တာဝန်ကျခဲ့တယ်။ သူပြန်ခုံတန်းရှည်တယ်သောအခါသူအကြမ်းဖက်သူအရာရှိက linesman အားဖြင့်စဲခံရဖို့ခဲ့သောအချက်ပေးဖို့နည်းပြရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
နေမာသို့သော်မိမိအသရမ်းအပြုအမူအတွက်တောင်းပန်ပေမယ့်ဦးခေါင်းနည်းပြကကောရိန္သုဆန့်ကျင်နေတဲ့ classico သင်္ချာအဘို့ရဲ့စဉ်အတွင်းကလပ်ရဲ့ကစားသမားထဲကထွက်ခွာခြင်းဖြင့်သူ့ကိုအပြစ်ပေးဖို့ရွေးချယ်။
နေမာမှအရမ်းချစ်ကြတယ်ခံခဲ့ရသောဒါရိုက်တာ၏ကလပ်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ Dorival အငယ်တန်းဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူမပျော်ရွှင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်သူ့ကိုအိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Dorival ရဲ့ထုတ်ပယ်နေမာသာကလပ်ရဲ့အရေးကြီးသောကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ဘရာဇီးဘောလုံးကယ်တင်လိမ့်မည်ဟုသူရှေးခယျြတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
"ဒီ Toiss" သူ၏ဘောလုံးကစားသမားဘတည်ငြိမ်အတွက်ဆာခဲ့ကြပြီနေမာ၏4ရာသက်ပန်မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေမာထွက်ခွာအပြောင်းအလဲနဲ့ဂျာစီတောင်းဆိုမှုများနှင့်ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်အပါအဝင်သူတို့ရဲ့အနုပညာရှင်သူငယ်ချင်းအတွက်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထွက်သယ်ဆောင်။
နေမာက "ဒီ Toiss" နှင့်အတူထွက်ညမှကြွလာအထူးသဖြင့်သောအခါ, ထိုဘဝကိုခံစားဖို့စိတ်သဘောထားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှမရှိစေရန်ဘာစီလိုနာရဲ့တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်းမှာမိမိအသင်းဖော်များက 'အည၏သခင်' 'ချစ်စနိုးခဲ့သည်။
အဆိုပါဘရာဇီးကြယ်ပွင့် Batman များအတွက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အမည်ပြောင်ချစ်တော်မူ၏။ သူ Dracula ရဲ့အစွယ်နဲ့ Batman မျက်နှာဖုံးကိုဝတ်ဆင်သည်ထင်ရှားလာသောအခါသူက 2015 တစ်ဦး '' ဟယ်လို '' ပါတီမှာထွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။
အခြားသူတွေပါတီများ၎င်းတို့၏မိန်းကလေးယူနေစဉ်, နေမာဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ သူကသူ့မိခင်ကြာပါသည်။ သူ့ကိုအလိုအရ,
"မေမေကမိသားစုကို run ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူမသည်သူမ၏မပါဘဲကျနော်တို့ဆုံးရှုံးချင်ပါတယ်ဘယ်သူလူတစ်ဦး၏ကြင်နာပါပဲ။ သူမသည်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ငါ၏အမောင်နှမကောလိပ်ရှိကြ၏နှင့်ဖေဖေအများကြီးခရီးသွားလာသောအခါငါသည်ငါ့ mom, မှအစစ်အမှန်နီးစပ်တယ်။ "
19 ၏လူငယ်တစ်ဦးနှစ်အရွယ်မှာနေမာသူမ၏ကိုယ်ဝန်ရတယ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝမိန်းကလေးတစ်ကယ်ရိုလိုင်းနား Dantas နှင့်အတူဇာတ်ခင်းနေတယ်။
သူမသည်သူ '' Davvi Lucas '' အမည်ရှိတော်မူသောသားကိုဘွားမြင်လေ၏။ နေမာသူမ၏ကိုယ်ဝန်မှတဆင့်သူမ၏အားလုံးအနားမှာရပ်လျက်နှင့်ထိုနောက်သူမ၏နှင့်အတူကျန်ရစ်၏။ အများအပြား Davvi Lucas ၏မွေးဖွားသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မြဲသာအနည်းငယ်နေမာကိုအမြဲမေတ္တာနှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့နှလုံးရှိခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်။ ယုံကြည်ပေမယ့်
ဘရာဇီးဘောလုံးသမားသည်သူ၏သားကိုမွေးဖွားချိန်ကတည်းကနှစ်သက်ခဲ့သည်။ သူ၏ရင်းရင်းနှီးနှီးရင်းနှီးမှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာဖခင်နှင့်သားရေကစားနည်းပါ ၀ င်သည်။
3 ၏အသက်အရွယ်မှာ Davvi Lucas ပြီးသားသူ့ကိုသွန်သင်သောမိမိအဖေ၏ဘောလုံးယဉ်ကျေးရိုက်ကူးဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ နေမာ, 2017 အတွက်ဘာစီလိုနာဘောလုံးကျောင်းကို FCB Escola အတွက်သူ့ကိုစာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်တစ်ဦးခြေလှမ်းနောက်ထပ်သင်တန်းပေး Davvi Lucas ယူ
The Mohawk စတိုင်လ်နှစ် -
နေမာဟာ Mohawk အဘိဓါန်ဆံပင်-ဖြတ်စတိုင်ဖြစ်စေခြင်းငှါသတင်းများအရပထမဦးဆုံးဘရာဇီးကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
နေမာ Mohawl စတိုင်။ အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့ဆံပင် Trends မှအကြွေး
လောလောဆယ်ဘရာဇီးနီးပါးတိုင်းလူငယ်ဘောလုံးပရိတ်သတ်သူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းကိုကူးယူရန်လေလံအတွက်ဆံပင်-ဖြတ်စတိုင်ပါစေ။ ဒါ့အပြင်သူသည်အနန္တတန်ခိုးရှင် Time Magazine မှများ၏မျက်နှာစာမှာ featured ခံရဖို့ပထမဦးဆုံးနှင့်သာဘရာဇီးဘောလုံးသမားဖြစ်ပါတယ်။
ဘရာဇီးသူတို့ '' ဟုခေါ်တွင်သောအရာကိုအဘို့နေမာအတွက်အလွန်စိတ်ပျက်ခဲ့ကြတစ်ဦးစျေးပေါပြောင်းရွှေ့ FC အသင်းဘာစီလိုနာ ''. မိမိအလူကြိုက်များ, ကျော်ကြားမှုနှင့်ထူးချွန်ဒေသခံဖောင်းပွအပေါ်အခြေခံပြီး, နေမာနှင့်သူ၏ကလပ်အထံတော်သို့ပြောင်းရွှေ့မြင်သောမျှသာ 57 သန်းယူရိုတို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့ FC အသင်းဘာစီလိုနာ။ ဤသည်အများအပြားဖို့ bargain ဖို့စိတ်ပျက်စရာအဆုံးအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။
စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်နှင့်ယေရှုခရစ်၏ ၁၀၀% သော
နေမာသည်ကလေးဘဝ မှစ၍ ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ နဖူးစည်းစာတမ်း (100% Jesus) ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအလွန်နှစ်သက်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်နေမာစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်ယာန်ကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကသူသို့မဟုတ်သူမခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအကြားပထမဦးဆုံးသညျယရှေုခရစျသကိုထည့်လေ့မရှိသည့်အခါမဆိုတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အသိစေမယ်လို့တစ်ခုခုအဖြစ်ဘဝကမြင်သည်။ နှစ်ခုလုံး ဂါဗြေလညျယရှေု နှင့် Edinson ကာဗာနီ နေမာနှင့်တူဆင်တူသညျယရှေုမတ်ေတာသလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရှိ
နေမာအတ္ထုပ္ပတ္တိ - Rise to Fame Story:
နေမာ 11 များ၏အသက်အရွယ်မတိုင်မီ Sao Paulo, ဘရာဇီးရဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းပေါ်ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ မိမိအဖယ်ရှားရာမှာနှင့်သဘာဘရာဇီး Samba ကစားစတိုင်သူ့ကိုအရေးကြီးသောလမ်းပေါ်ဂိမ်းများအတွက် feature ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောလမ်းဘောလုံးကွင်းစီစဉ်နေဖြင့်ဦးစားပေးရှေးခယျြမှုဖြစ်စေတော်မူ၏။
သူကကြီးမြတ်အကွာအဝေးကနေရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ဘောလုံးလှုဖို့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သူ၏ဆီးအတားမရှိ, လက်ဝဲခြေမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရူပါရုံကို dribbling ကြောင့်အရှိန်အဟုန်မှကမ်းခြေနဲ့ Hard မျက်နှာပြင်လမ်းပေါ်မှာဘောလုံးအပေါ်ထူးချွန်ကျွမ်းရရှိခဲ့သည်။ ဤသည်နေမာကွင်းပေါ်မှာဘောလုံးကစားရန်လမ်းဘောလုံးကွင်းကနေတိုးကိုမြင်တော်မူ၏။
နေမာနောက်ပိုင်းတွင်ပြောက်နှင့်သူအလားအလာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြရှိရာမိမိတိုင်းပြည်ကလပ်ဆန်းတို့စကစားနိုင်ရန်အတွက်ငြင်းဆန်သောအခြားကလပ်အသင်းအကြားအနောက်ဘက်ဝက်ပေါင်ခြောက်, Real Madrid အသင်းကနေကင်းထောက်ခြင်းဖြင့်ဆည်းကပ်ခဲ့သည်။ 2011 ခုနှစ်တွင်သူသည်ထို့နောက်ဦးခေါင်းနည်းပြ, Luiz Felipe အားဖြင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်အစက်အပြောက်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
သူကနောက်ဆုံးတွင် 27 အပေါ်ဘာစီလိုနာအသင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်th 2013 သန်းဒေါ်လာမေလ 57 ၏။ လေးနှစ်အကြာမှာတော့သူကတစ်ဦးစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးကြေးများအတွက် PSG အသင်းကလက်မှတ်ရေးထိုး $ 263 သန်း။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမာအငယ်တန်းကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
pleasantry 25 တွင် 2019၊ 10 - 28 နံနက်
Neymar Jr doit se retrouver au Real Madrid အသင်း en 2019 et doit viser le ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံးဃသို့မဟုတ် et la Coupe du Monde ည aime tres Bien Neymar et သား fils et je veux devenir le အသနားခံစာ Neymar Jr
ဒေါက်ဂလပ်ကော့စကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်